Xildhibaanada Hawiye oo diidan la kulanka Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaanada Hawiye oo diidan la kulanka Farmaajo
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in inta badan xildhibaanadaan ay diideen la kulanka madaxweyne Farmaajo, iyagoona kulanka Farmaajo ee waqti xaadir kaan ku tilmaamay mid dano gaar ah huwan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray xildhibaanada Beesha Hawiye ee labada gole ku metela Baarlamaanka Soomaaliya si uu la tashiyo dhinaca magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub ugala sameeyo.
Kulankaan oo lagu balansanyahay caawa oo Jimca soo geleyso ayaa la sheegayaa in aysan cago badan ku taagneyn qabsoomidiisa, waxaana socdo dedaal xooggan ay bixinayaan xildhibaanada garabka taageersan madaxweynaha ee Beesha Hawiye oo isku dayayo suurtoobida kulankaan oo qarka u saaran in uu fashilmo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa in arintaan lagu war geliyay, islamarkaana loo sheegay in xildhibaanada badankooda diideen la kulankiisa, waxaana lagu soo waramayaa in madaxweynaha go'aansaday hakinta kulankaan, haddii xal kale la waayo.
Ujeedka rasmiga ah ee Madaxweynaha ka leeyahay kulankaan lama oga, haseyeeshee waxaa xusid mudan in Madaxweynaha uu ku guul dareysatay magacaabidda Ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali, waliba in ka badan 30 cesho.
Beesha Hawiye oo awood qeybi u leh xilak Ra’isul Wasaaraa Soomaaliya ayaa xiligan ka maqan saaxada awood qeybsiga dalka, waxaana booska Hawiye ee Ra’isul Wasaaraha ku sime kasii ah Mahdi Guuleed oo kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee Soomaaliland.
Rooble oo eedeyn culus u jeediyay la-taliyeyaasha dowladda
Warar 17 January 2021 16:43
Wuxuu daahfuray ROGANE kulan ku saabsan Dib u eegista, Qiimeynta iyo Dib u habeynta Qaab-dhismeedka Darajooyinka iyo Mushaarka Shaqaalaha Rayidka ah ee Dowladda.
Warar 17 January 2021 15:27
Taliyaha DANAB oo ku dhaawacay weerar lagu qaadey Gud Sh/Hoose
Warar 17 January 2021 11:34
Askar katirsan DANAB oo Qarax lagu dilay
Warar 17 January 2021 9:29